Cadaallada Soomaaliya oo ku celisay in la dardar gelinayo hubka dhigista iyo bur burinta is-baarooyinka – Radio Daljir
Agoosto 14, 2013 3:22 b 0
Muqdisho, August 14, 2013 – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dar-dar gelinaysa olilhii ka dhanka ahaa hubka sharci darrada ah ee lagu qaaday meelo badan oo ka tirsan Muqdisho, halkaasi oo lagu iibin jiray hub kala gedisan, sida xaruunta Cirka, oo ah meesha ugu weyn hubka lagu iibin jiray gudaha caasimada.
Wasaarada cadaallada ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay hadalkaasi, wasiirka wasaarada Cabdulaahi Abyan Nuur oo saxaafada la hadlay wuxuu sheegay in mar kasta la xoojinayo ololaha ka dhanka ah hubka sharci darrada ah, iyo qorshaha hubka dhigista ee qeybta ka ah sugida amniga dalka.
Sidoo kale wasiirka cadaallada Soomaaliya wuxuu sheegay in ay sharci darro tahay in dadka laga qaado lacago inta jid-gooyo la dhigto, mudane Abyan wuxuu sheegay in la adkeynayo oo la hir-gelinayo awaamiirtii madaxda sare ee qaranka ay ka soo saareen isbaarooyinka sharci darrada ah.
Wasiirka caddaalada wuxuu degniin u jeediyey dadka is-baarooyinka dhigta ?Isbaaro waan ognahay faa?iida darrida ay keentay 20-kii sano ee aan ka soo gudubnay,dhimasho, dhaawac iyo bur bur ayay bulshada u horseeday, dowladdu ma ogala in isbaaro la dhigto oo shacabka lagu dhibaateeyo, marka sidaas halooga digtoonaado?
Waxaa jira caqabado badan oo hortaagan ilaa hadda in la hir-geliyo ololaha ka dhanka ah hubka sharci darrada ah iyo hubka dhigista, wasiirka cadaallada oo amuurtaasi ka? hadlay wuxuu sheegay in dowladdu ay qaadayso talaabooyin waa weyn oo muuqda, si wax kasta loogu dhameeyo sidii loo qorsheeyey.
Sheeko Gaaban: qaybtii 18’aad ee sheekadii Ismadhaanto (Dhegayso)